Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka ONLF oo shirar Abaabul Ah u Qabtay Shacabka.
Ciidanka ONLF oo shirar Abaabul Ah u Qabtay Shacabka.
Posted by Wariye Qaran	/ August 26, 2018
Wararka naga soo gaadhaya gudaha Ogaadeniya gaar ahaana xarunta dhexe ee JWXO ayaa waxay sheegayaa in ciidamada jabhada xoraynta Ogaadeniya Ogaadeniya ee ONLF ay shirar abaabul ah ka bilaabeen tuulooyin badan oo kamida gudaha Ogaadeniya.
Ciidamada ONLF ayaa waxay ilaa shalay shirar ku qabteen tuulooyinka kamida gobolada Jarar, Nogob iyo Qorahay waxana kamid ah Buraale, Laas Galool, Madax Maroodi, Qoolaali, Farmadow, Jeerinka iyo Saliida.
Tuulooyinkan ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay waxaana shacabka iyo dhalinyaraduba ay si marxabo ah usoo dhaweeyeen ciidanka JWXO, shacabka ku dhaqan tuulooyinkaas ayaa shirar ay u qabteen waxayna sii wadi doonaan shirarka noocaas ah oo kale.
Wararkan iyo waxa kasoo kordha.